Dowladda Uganda oo ka been abuurtay Muwaadin Soomaaliyeed, Daawo | Somsoon
Home WARAR Dowladda Uganda oo ka been abuurtay Muwaadin Soomaaliyeed, Daawo
Dowladda Uganda oo ka been abuurtay Muwaadin Soomaaliyeed, Daawo
Sheikh Cabdullahi Sheikh Shaamow oo ah Macalim dugsi Qur’aan ayaa beeniyay in uu dhalay Madaxweynihii hore ee dalka Ugaanda Idi Aamin.
Sheikh Cabdullahi oo tan iyo sanadkii 1975-kii ku noolaa deegaanka Carbiska ee koonfurta magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ku heystay intii uu ku noolaa dugsi Qur’aan.
Maalmo ka hor ayuu ka soo muuqday warbaahinta caalamka iyo kuwa Soomaaliya, iyadoo la leeyahay waxaa dhalay oo ay kala lumeen Madaxweynihii hore ee dalka Ugaanda Idi Aamin.
Sheegashada ah in Sheikh Cabdullahi uu yahay nin Ugaandeys ah ayaa soo shaac baxday todobaad ka hor, kadib markay ay Soomaaliya safar kor meer ah ku yimaadeen Xildhibaano iyo saraakiil ka socotay dowladda Ugaanda oo ay ciidamo nabad ilaalin ah ka joogaan dalka.
Wafdigaas ka soday Ugaanda waxa ay kor meer ku tageen xeryo ay daganyihiin ciidamada ka jooga Soomaaliya, waxaana xeryihii ay tageen ka mid ahaa mid ay Carbiska ka deganyihiin ciidamada Ugaanda ee ka tirsan AMISOM, halkaas oo markii ugu horeysay ay isku arkeen wafdiga iyo Sheikh Cabdullahi Shaamow.
Sheikh Cabdullahi oo la hadlay Dalka TV, waxa uu sheegay in markii ay arkee isaga xubnihii ka socday Uganda ee kor meerka ku tagay deegaanka uu warkoodu ka bilaawday “ninkaan waa anaga waana nin Ugaandeys ah” taasna uu la yaabay.
Sheikh Cabdullahi maalmo kadib ayuu sheegay in wiil uu dhalay uu lug ka jiiray gaari ay la haayeen ciidamada Ugaanda, markii uu u dacwoodana ay xeradooda geeyeen kana qaadeen sawirro uu san markaas garanay u jeedka ay ka lahaayeen raalina uusan ka aheyn.
Maalmo kadib ayuu sheegay in uu warbaahinta iyo baraha Bulshada ku arkay sawiradiisa iyadoo lagu tilmaamayo in uu yahay wiilka madaxweyhii hore ee Ugaanda Idi Aamin, isla markaana ay kala lumeen hooyadiisna ay tahay Soomaali ku dhalatay Magaalada Baydhaba.
Sheikh Cabdullaahi Sheikh Shaamow waxa uu cadeeyay in uu yahay nin Soomaali ah, isla markaana laga been abuurtay.
Si lamid ah waxaa marqaati ahaan ugu soo baxay dad aqoon fog u leh Sheikh Cabdulahi iyo waalidkiis, kuwaas oo si cad u sheegay in Sheikh Cabdullahi laga been Abuurtay.
Article horeShaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Chelsea iyo Man United ee tartanka Carabao Cup oo la shaaciyey
Article socoda Wasiir Sebriye: “Ahlu-Sunna waxay ku gor-gor tamaysaa Dhuusamareeb”